मेडिकल कलेज सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले पूर्वप्रधानमम्त्रीहरु केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई झापामा आफु विरुद्ध चुनाव लडेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।क्यानडा नेपाल नामको युट्युव च्यानलले भदौ ७ गते अपलोड गरेको अन्तरवार्तामा प्रसाईले जनताको नजरमा ओली, प्रचण्ड र शेरवहादुर देउवाको तुलनामा जनताले आफुलाई पत्याउने दावी गर्दै शंका लागे आफुसँग चुनाव लड्न चुनौती दिएका हुन ।
तपाईको कलेजले त सम्वन्धन नपाउने भयो नी भन्ने प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रसाईले अव आफु नेताको पछाडि नलागेर जनताको सेवामा लाग्ने वताएका छन् । आफु जनताको मनमा वस्न सफल भएको दावी गरेका उनले अहिलेको राजनीतक नेतृत्ववाट देश र जनताले कुनै आशा गर्न नसक्ने दावी पनि गरे ।
‘प्रचण्ड, ओली, वावुराम, शेरवहादुरलाई जतिले चिन्छन् त्यतिले मलाई पनि चिन्छन् । झापामा भोटिङ्ग गरौ न जनताको मनामा को छ। वहाँहरु हुनुहुन्छकी दुर्गा प्रसाई छ’ उनले भनेका छन्–‘जनताको दिलमा वस्न सक्नु पर्यो। आर्मी र प्रहरीको घेरामा। वहाँहरु एक्लै हिड्न सक्नुहुन्छ ? वहाँहरुले परिस्थिती कस्तो क्रियट गर्नु भएको छ । यो राजनीतिक नेतृत्ववाट आशा नगर्दा हुन्छ।’
अन्तरवार्ताका क्रममा प्रसाईले माआवादी नेताहरुको राजनीतिक लुछाचुडी प्रति खह्रो आलोचना गरेका छन् । कुपोषणले घिटिघिटी भएका जनताको मतवाट जितेका नेताहरुले काठमाण्डौंमा वसेर मन्त्रीका लागि हारालुछ गर्नु निर्लज्जताको पराकाष्ठा भएको उनको भनाई छ। ‘हिजो वहाँहरु रुकुम रोल्पावाट के भनेर आउनु भएको थियो । के भनेर जनयुद्ध सुरु गर्नु भएको थियो ।
रुकुम रोल्पाका मान्छेको तर्फवाट म वहाँहरलाई सोध्छु’ उनले भनेका छन्–‘२५ वर्षको मान्छे आज ६० वर्षको देखिन्छ, खान नपाएर। नाकको फुली र वुलकीमा सिगानका पाप्रा टाँसिएका छन् । ३०÷३५ वर्षका केटीका दाँत खुस्किएका छन्, कुपोषण भएर। त्यसता मान्छेका भोट लिएर आएर काठमाण्डौमा राजनिति गर्नु भनेको यो भन्दा निर्लज्ज, लाजमर्दो र यो भन्दा घटिया चरित्र केहि होईन ।
वावुराम भट्टराई र प्रचण्डले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री वनाएर जनयुद्धको औचित्य सिद्दयाको पनि उनले दावी गरे । ‘१७ हजार मान्छे मरे, जनयुद्धमा। प्रचण्डलाई आदर्श पुरुष भनेर मान्थे मँ। शेरवाहदुरले वावुराम र प्रचण्डको टाउकोको मुल्य राखेको होईन।
आज वावुराम भट्टराई र प्रचण्ड सवै मिलेर त्यही शेरवहादुरलाई प्रधानमन्त्री वनाउँदैछन्’ प्रचण्डको साथ छोड्नु पर्ने कारणका विषयमा उनले भने–‘भनेपछि त्यस्तो ठाउँमा दुर्गा प्रसाई वस्छ, अलिकतित इज्जत छनी हौ हाम्रो । वरु कांग्रेसै हुनु नी यीनीहरु, किन आफनो पार्टीको नाम राख्नु ।’
पछिल्लो समयमा प्रचण्ड माधव नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठको वहकाउमा परेर ओलीको विरुद्धमा लागेको भन्दै प्रसाईल आलोचना गरे । अहिले प्रचण्डलाई यो कुरा मनमा लागेको पनि उनले वताए । ‘प्रचण्डले राजनीतिमा चलखेल त गरे।
तर, माधव नेपाल र नारायणकाजीको घेरावन्दीवाट निस्कन सकेनन्’ उनले भने–‘चलखेलको लागि १७ हजारको ज्यान गएको हो र ? तिनीहरुको परिवारको दशा के छ ? कसैको परिवार नै समाप्त भयो। टाउकोमा गोली लागेका कतिपयको गोली मैले निशुल्क निकाल्दिएको छु ।’